किन तपाईको उदासिनता बढ्दै छ ,कतै यी ५ चीजको सेवन त होइन ? – Etajakhabar
किन तपाईको उदासिनता बढ्दै छ ,कतै यी ५ चीजको सेवन त होइन ?
ताजा खबर :-उदास रहन को चाहन्छ र? सबै खुशी र तनावमुक्त जीवनको अपेक्षा राख्ने गर्दछन् । तरपनि केही कुरा वा चीज यस्ता हुन्छन्, जसले जीवनमा उदासिनता भरिदिन्छ । कतिपय समय तपाईको खानपानको कारण पनि अनुहारमा उदासिनता भरिन्छ । जान्नुहोस्, ती ५ चीज कुन हुन्, जसको कारण मानिसको जीवन उदास बनाउँछ ।
१- जाँडरक्सीको सेवन
तपाई जाँडरक्सीलाई खुशीको साथी मान्नुहुन्छ होला तर दुखलाई भुलाउनका लागि पनि यसैको साथ चाहिन्छ । यसले सिधा तपाईको स्नायू प्रणालीमा असर पार्छ र यसको गतीलाई ढिलो बनाउँछ, जसले तपाईलाई कयौँ पटक खुशीमा उदास महसूस गराउन सक्छ ।
विशेषगरी रातो मासु वा डिब्बामा प्याक गरिएको मासु निकै नोक्सानदायक हुन्छ । यसमा संतृप्त बोसो(saturated fat)को मात्रा अधिक हुन्छ, जसले इन्सुलिनको स्तरमा परिवर्तन गर्छ । यसको दुष्परिणामको रूपमा उदासिनता मात्र नभई गम्भीर रोगहरूको सम्भावना बढ्छ ।
३- सेतो ब्रेड
एक सोधका अनुसार, सेतो ब्रेडमा पाईने कार्बोहाइड्रेट को अत्यधिक मात्रा महिलाहरूको उदासिनताको कारण बन्न सक्छ । यो थकानको कारण पनि बन्न सक्छ ।
कफीमा पाईने कैफिन तपाईको निन्द्रा र शान्तिलाई भङ्ग गर्छ, जसको कारण मानसिक थकान हुने र अन्त्यमा उदासिनताको सामना गर्नुपर्दछ ।
भातको अत्यधिक सेवन पनि मानिसलाई उदास बनाउनको लागि जिम्मेवार हुनसक्छ । यसमा रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ, जसले हर्मोनल परिवर्तन गर्नुको साथै शरीरको ग्लाइसेमिक सूचांक(glycemic index)लाई प्रभावित गर्छ र उदासिनता महसूस हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष १९, २०७४ समय: २३:५४:२२